प्रलेसलाई सल्लाहकारहरूको सल्लाह - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
कार्यक्रममा ढिला आइपुगेकोमा आत्मालोचित छु । हरेक चीज जन्मने, विकास हुने र मर्ने हुन्छ । स्थापनाकालमा सामन्तवाद र अर्ध–औपनिवेशिकबाट मुक्त हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नारासँगै प्रगतिशील लेखक सङ्घले पनि त्यो नारा दिएको देखिन्छ । यो संस्थाले जति काम गर्छ, त्यो नै काम हो । बीचमा यो संस्थामा एक पटक फुट पनि भयो । वस्तुगत आवश्यकताले हामी फेरि एक ठाउँमा आयौँ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रका कारण नेपालमा अब सामन्तवाद रहेन । माओले भनेजस्तै अर्ध–सामन्तवाद अब नेपालमा छैन । नेपालमा पुँजीवाद पनि छैन । नेपालमा अहिले भूमण्डलीकृत चक्रमुनि दलाल पुँजीवाद रहेको छ । नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति पनि छैन । संस्कृतिको क्षेत्रमा भने सामन्तवाद छ । माक्र्सकै घरमा पनि दासी थिइन् । वास्तवमा हामी एउटा युगबाट अर्को युगमा आइपुगेका छौँ । पुरानो युगका निमित्त बनेका सङ्गठन वा संयुक्त मोर्चा वा संस्थाहरू अब पुरानै ढङ्गबाट चल्न सक्तैनन् । त्यसैगरी, पार्टीहरू पनि अब पुरानै विधिबिाट चल्न सक्तैनन् । महानतासितै तुच्छता पनि जन्मिरहेको हुन्छ । अर्थात् महानतासित तुच्छता जन्माउने कारखाना हुन्छ । आमाहरू उत्पीडित हुँदैनन् भने महान् आमाहरूको मृत्यु हुन्छ । छोरा–छोरीले आफ्नी आमाको दुःख–कष्ट देखेर नै आमालाई महान् भनेका हुन् । सबै मानिसलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा नै किन पुग्नुपर्छ ? तुच्छ हुन कसैलाई पनि मन लाग्दैन । महानताको आबरणमा निरङ्कुशता जन्मने खतरा हुन्छ । प्रलेसमा रागेपाटेको अवस्था हामीले यसै भनेका होइनौँ । अब नेपालमा भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्ध लडाइँ केन्द्रित हुन्छ । भूमण्डलीकृत पुँजीवादका विरुद्ध नलड्ने लेखकहरू प्रगतिशील लेखक हुन सक्तैनन् । नेपालमा एकखालको राजनीतिक सङ्क्रमण सिद्धिएर ध्रुबीकरणको सङ्क्रमण सुरु भएको छ । पुँजीवाद स्थायित्व हुन थालेपछि २ पार्टी व्यवस्था सुरु हुन्छ । पुँजीवादको विकास नभएको बेलामा मात्र धेरै विद्रोहीहरू जन्मने र क्रियाशील हुने गर्दछन् । यसमा सोहीअनुसारको डिजाइन शक्तिकेन्द्रले तयार पारेका पनि हुन्छन् । नेपालमा माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेपछि अरू विघटित हुन्छन् । विप्लव र वैद्यको हेर्न बाँकी छ । भक्तपुरमा रोहितसत्ता चलेको छ तर त्यो पनि विघटित अवस्थामा छ । ऋृषि कट्टेलको पुष्पलालको धार र मोहनविक्रमको धार पनि अब धेरै समय टिक्दैनन् । त्यसैले अहिलेसम्मको छलफलमा हामी के भन्न सक्छौँ भने भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई स्वीकार्ने शक्ति वामपन्थी वा प्रगतिशील रहँदैनन् । माओवादी केन्द्र र एमालेका बीच एकता भएपछि एकीकृत पार्टीले अङ्गीकार गर्ने कार्यदिशामा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्त कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र प्रलेसको अवस्था निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्र र एमाले जोड्दा सायद प्रलेसमा पनि दुई तिहाइ हुन्छ । उनीहरू उत्तर–आधुनिकतावादी उपभोक्तावादका विरुद्ध लड्छन् कि लड्दैनन् ? उनीहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम कस्ता हुन्छन् ? त्यसका आधारमा मात्र उनीहरूलाई वामपन्थी भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । घटनाक्रमले विषयको यही गम्भीरतालाई सङ्केत गरिरहेको छ । नेकपाका संस्थापक नेवार भए पनि तिनीहरू तागाधारी थिए । त्यसैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै तागाधारीबाट सुरु भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा माओवादी केन्द्र उदारखालको तागाधारी शक्ति हो, एमाले कठोरखालको तागाधारी शक्ति हो । एमाले र माओवादी केन्द्रको मिलन भनेको कठोर तागाधारी र उदार तागाधारीका बीचको मिलन हो । यो निकै खतरापूर्ण रहेको छ । सामन्तवाद तथा सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी रहँदासम्म प्रगतिशील लेखक सङ्घमा कुनै समस्या आउँदैन ।
प्रगतिशील लेखक सङ्घको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को बैठक साँच्चै गम्भीर प्रकृतिको रह्यो । सल्लाहकारहरूले उदात्त भएर आफ्नो धारणा राख्नुभयो । प्रगतिशील लेखक सङ्घ संयुक्त मोर्चा भए यसको आफ्नै खालको जनवादी केन्द्रीयता छ । सल्लाहकारहरूले बैठकमा उच्च जनवादको प्रयोग गर्नुभयो । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको ध्रुबीकरणबाट प्रलेस पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको महसुस भयो । एमालेमा माओवादी केन्द्र विलय हुने लगभग पककापक्की भएसँगै प्रगतिशील लेखक सङ्घसित आबद्ध घटक तथा त्यससित सम्बन्धित लेखक–साहित्यकारबीच वैचारिक ध्रुबीकरण देखापर्नु स्वाभाविक परिघटना हुन् । बैठकमा सल्लाहकारहरूबाट प्रस्तुत भएको विचारलाई संश्लेषणात्मक रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः